site na nhazi na 20-05-06
Agba ọla ọcha na-ekpo ọkụ Dip Galvanized Application overhead Power Line ngwa na-enye ike 50 Ton / Tọn kwa ụbọchị nkọwapụta igbe
Ndị na-ebubata ngwa ahịa China na-ekpo ọkụ ịgbanye ụdị jlu ụdị arịlịka maka ndị gbakọtara
Standard ANSI, DIN, GB, ISO Ebe nke Origin Yongnian, China (Mainland) ule ihe siri ike akụrụngwa, nnwale nnwere ike ịkwụ ụgwọ TT 30% na-ebu ụzọ tupu emeputa usoro Samples ịlele Inner na-adọta 25kg nzipu oge EXW Yongnian na-ebu. na cus ...
j bolt .Anyị na-akpọ ya (arịlịka arịlịka, arịlịka arịlịka, mkpọchi ala)
1.j bolt .Anyị akpọkwara ya (arịlịka arịlịka, ntọala arịlịka, mkpọchi ala) 2.Ma na-eji akụrụngwa ndị a: iron carbon, 45 # steel, 40 Cr, 35CrMo; 3.Surface Emecha: zinc plated ma ọ bụ oji ma ọ bụ nke dị larịị ma ọ bụ HDG; 4.Size: M6-M64; ogologo 12mm-3000mm 5.Grade: 4.8 8.8 10.9 12.9 6.Standard: DIN, JIS, BS, ASME…
Kedu ihe kpatara mkpịsị aka siri ike chọrọ iji mebie ike iji mezuo ihe ndị a chọrọ
site na nhazi na 20-04-07
Kedu ihe kpatara mkpịsị aka siri ike chọrọ iji kpochapụ ike iji mezuo ihe ụfọdụ akụkụ ụfọdụ na-enwe nrụgide dị elu karịa etiti ahụ n'okpuru ọrụ mgbakwunye ibu na mmetụta dị ka nchikota na ịgbanye ụkwụ. N'ihe banyere esemokwu, a na-eyi akwa oyi akwa n'elu mgbe niile. Ya mere, ihe a choro ...
Mee bolts ike dị elu chọrọ nlebara anya tupu nrụnye Gịnị ma ọ bụrụ na enwere nsogbu
Ngwongwo ike dị elu chọrọ nlebara anya tupu nrụnye? Ọ bụrụ na nsogbu dị? Tupu echichi nke ike dị elu, ọ dị mkpa ịnweta nghọta zuru oke nke ọrụ ahụ dum ma kaa akara dịka eserese ndị ahụ. Ọ dị mfe maka ndị na-arụbu ọrụ ichefue ịlele d ...
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndị akwụ ụgwọ, biko hapụ ozi email gị ka anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.
ADANYADongmingyang Mpaghara Mpaghara, Yongnian District, Handan City, Hebei Province
ỌR. ỌR.08:30 ~ 17:30 Ubọchị ruo Satọde
© nwebisiinka - 2010-2019: Echekwabara ikike niile.